कमल केसी सोमबार, २ फाल्गुण, २०७८
आजभन्दा ११ वर्ष अगाडि स्थापना भएको फुडमाण्डु नेपालको पहिलो अनलाइन फुड डेलिभरी कम्पनी हो । फुडमाण्डुले कोरेको बाटोमा आज एक दर्जन बढी स्टार्टअप आएका छन् ।
जुन बेला बजार थिएन्, त्यो बेला नेपालमा अनलाइन फुडको बजार बनाउँदै अगाडि बढेको हो फुडमाण्डु । हालै मात्र फुडमाण्डुले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डबाट ४६ करोड लगानी उठाउने एमओयु गरेको छ ।
यसैसन्दर्भमा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले गर्ने उक्त लगानी के के मा परिचालन हुन्छ ? अब फुडमाण्डु कसरी अगाडि बढ्छ ? लगायतका विषयमा फुडमाण्डुका संस्थापक मनोहर अधिकारीसँग आइसिटी समाचारका लागि कमल केसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
फुडमाण्डुमा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले ४६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । यसबारे केही बताइदिनुहोस् न ?
फुडमाण्डुमा ४६ करोड लगानीका डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डसँग हामीले एमओयु गरेका छौँ । यो तेस्रो राउन्डको लगानी हो ।
यसभन्दा अगाडि हामीले २ पटक लगानी उठाइसकेका छौं । सन् २०१६ मा टिएनए र सन् २०२० मा टिम भेन्चर कम्पनीले लगानी गरेका छन् ।
यसअघि पहिलो र दोस्रो राउन्डमा कति लगानी उठाउनुभएको थियो ?
सन् २०१६ मा टिएनए र सन् २०२० मा टिम भेन्चर कम्पनीले गरेको लगानी खुलाउन मिल्दैन । तर, हालको भन्दा कम स्केलमा रकम उठेको थियो ।
डोल्मा इम्प्याक्टबाट आउने लगानी केके मा परिचालन हुन्छ ?
डोल्मा इम्प्याक्टबाट आउने लगानी फुडमाण्डुको ग्रोथमा परिचालन हुन्छ । ग्रोथका लागि चाहिने पूर्वाधार, ह्युमन रिसोर्स, मार्केटिङ, प्रविधि, सेवाविस्तार र नयाँ भर्टिकलमा प्रयोग हुन्छ ।
यसभन्दा अगाडि आएको लगानीको उपलब्धि कस्तो रह्यो ?
यसभन्दा अगाडि उठेको रकम चाहिँ कोर बिजनेसमा प्रयोग भएको थियो । त्यो रकम फुड डेलिभरीको ग्रोथका लागि लगाएको हो । त्यो सानो स्केलमा थियो ।
पैसा पनि हामीले सानो स्केलमा उठाएका थियौं । अहिले ठुलो स्केलमा फन्डिङमा भएको छ ।
फुडमाण्डु अहिले काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा सीमित छ । देशका अन्य सहरमा सेवा विस्तार गर्ने योजना छ ?
विस्तार अन्य सहरमा पनि सेवा विस्तार गर्ने हाम्रो योजना छ । अहिले हामी कुन सहरमा जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर फिजिबिलिटी हेर्दै छौं । त्यसपछि फुडमाण्डु अन्य सहरमा पनि जान्छ ।
कोरोना महामारीपछि तपाईंहरूको व्यवसायमा कस्तो परिवर्तन आयो ?
हाम्रोमा पहिलाभन्दा परिवर्तन भएको छ । तर, अन्य डिजिटल क्षेत्रको तुलनामा त्यति धेरै परिवर्तन आएको छैन । पहिलाभन्दा ग्रोथ भएको छ । डिजिटल पेमेन्टको कुरामा एकसमै ग्रोथ भएको छ ।
पहिला १० प्रतिशतभन्दा पनि कम डिजिटल पेमेन्ट हुन्थ्यो । अहिले ४० प्रतिशत जति पेमेन्ट अनलाइनबाट हुन्छ । अनलाइन फुडको जनचेतनामा पनि अलिकति बल पुगेको छ । राम्रो हुन्थ्यो होला तर हामीले राम्रोसँग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएनौं ।
तपाईंहरूले एक दशकअगाडि फुडमाण्डु सुरु गर्नुभयो । अहिले तपाईंहरूले कोरेको बाटोमा थुप्रै फुड डेलिभरी स्टार्टअप जन्मिएका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यसलाई म सकारात्मक तरिकाबाट हेर्छु । बजार धेरै ठुलो छ । बजार भन्नाले पहिले नै सिर्जना भएको बजार होइन यो । विस्तारै बढ्दै जाने बजार हो । हाम्रो बजार ब्स्तिारै बढ्दै गइरहेको छ ।
यो नयाँ उद्योग भयो । राम्रो स्कोप छ । ग्रो गर्ने बजार भएपछि नयाँ उद्योगलाई एउटा मात्रै खेलाडीले त ग्रो गर्न सक्दैन । त्यो हिसाबमा यसको विकास र विस्तारका सबैको महत्वपूर्ण रोल हुन्छ र छ ।
आइपिओमा जाने केही योजना छ ?
अल्टिमेट हाम्रो लक्ष्य भनेको पब्लिकमा जाने छ । समय कति लाग्ला अहिले नै भन्न सकिदैन तर अल्टिमेट गोल पब्लिकमा जाने छ ।
तपाईंहरूका आगामी योजनाहरू के के छन् ?
नयाँ लगानीसँगै अब आक्रामक रूपमा जाने हाम्रो योजना छ । हाम्रो ग्रोसरी डेलिभरी फुडमाण्ड फ्रेसलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउँदै छौं, गरिरहेका पनि थियौं त्यसलाई अब व्यवस्थित लैजाने हाम्रो योजना छ ।
टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टमा पनि काम गर्छौ, त्यसले स्केलअप गर्न सजिलो हुन्छ । अन्य सहरमा सेवा विस्तार गर्ने योजना छ । फुडकै वरिपरि बसेको के गर्न सकिन्छ, ग्राहकलाई नयाँ सेवा के दिन सकिन्छ, त्यसमा हामी एक्सप्लोर गरिरहेका छौं । फुडभन्दा बाहिर हामी जाँदैनौं ।
आज एकदिन मात्र सुरक्षित इन्टरनेटको कुरा गरेर हुँदैन्, दिन दिनै गर्नुपर्छः अनिल रघुवंशी (अन्तर्वाता)
मंगलबार, २५ माघ, २०७८